Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii xarunta Dhexe ee JWXO iyo dagaaladii bishan May lagu naafeeyay cadawga
Warbixintii xarunta Dhexe ee JWXO iyo dagaaladii bishan May lagu naafeeyay cadawga
Posted by ONA Admin	/ May 21, 2014
Warbixintii ugu dambaysay een ka helnay Xarinta Dhexe ee JWXO ayaa ka faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee bishan aan ku jirno ee May sanadka 2014ka lagu qaaday cadawga. Dagaaladaa oo meela kala duwan oo dalka ah ka dhacay ayaa cawaga khaasaare dhimasho oo gaadhay 45 askari oo daroojin kala duwan lahaa iyo dhaawac intaa ka badan lagu gaadhsiiyay sidoo kalena lagaga gubay gawaadhida ciidanka qaada iyadoo hub iyo saanad kale looga furtay. Faahfaahinta dagaaladaa ayaa u dhacay sidan;
4/5/14 Duuri oo Dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya kudhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay inta lahubo 2 askari tiro aan laxagiijinin na waa lagaga dhaawacay.
4/5/14 Ceelqod oo Dagmada Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin. Isla 4/5/14 Dhabarduleel oo Awaare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada doolka iyo daalun nimada kujooga ciida ogadenia loogu gaystay khasaare naf iyo maalba leh.
6/5/14 Shabeelay oo Dagmada Dhagaxmadow udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 4 askari tiro aan lacayimina waa laga dhaawacay.
7/5/14 Galooljowle oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/5/14 Xaraar oo Qabridahare udhaw dagaal kudhex maray CWXO iyo kuwa saama laluudka ah ee gumaysiga Itoobiya waxaa ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
10/5/14 Dhurwaale oo Qabridahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
12/5/14 Aqalaalayowga oo Tuulada Yucub ee Gobolka Doollo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/5/14 Caloolewayne oo Yucub katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada
wayaanaha lagaga dilay 4 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/5/14 Xuubcaaro oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kulul oo CWXO iyo kuwa
gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 9 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/5/14 Golhowlay oo Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
15/514 Laanjaleelo oo Danood katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soogalay kolonyo baabuur ah waxaana goobta lagu holciyay 1 baabuur oo isaga iyo wixii saaraaba isla basbeeleen sidoo kale tacshiir lahuwiyay baabuurtii kale waxaa lagu dilay inta lahubo 9 askari 13 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/5/14 Golduulaan oo Tuulada Galadiid ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 11 dhaawacana faahfaahin lagama hayo.
17/5/14 Mundulka oo Dhagaxmadow katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay ku gubeen 1 baabuur oo kuwa ciidamada cadawgu qaataan ah.
Viva cwxo ilahy nasrigisa ayaa lofuray